Fandrosoana sy fampiharana ny raharaha BIM - Amerika afovoany - Geofumadas
Aprily, 2019 Engineering, fanavaozana
Ny nankanesana tany amin'ny BIMSummit tany Barcelona tamin'ny herinandro lasa teo dia nahafinaritra. Jereo ny fomba fijerin'ny fomba fijery samy hafa, manomboka amin'ny olona tsy matoky tena hatramin'ny fahitana fahita lavitra, fa ao anatin'ny fotoana manokana iray amin'ny revolisiona amin'ireo indostria isika izay manomboka amin'ny fakana vaovao eny an-tsaha ka hatramin'ny fampidirana ireo asa ao anatin'ny fotoanan'ny olom-pirenena. Ny BIM dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampifangaroana ny angovo amin'ny famoronana haitao izay ampiasain'ny sehatry ny fandraharahana, ny fangatahana serivisy tsara kokoa avy amin'ny mpampiasa farany ny serivisy ho an'ny daholobe ary ny fifandanjana mety hitranga.
Saingy eo anelanelan'ny tantaran'ny fahombiazan'ny fanantenana any amin'ireo firenena Nordic izay tsy mahatafintohina ny tombontsoan'ny tsirairay intsony ny firesahana ny OpenSource sy ny hamehana ataon'ny firenena vanguard teknolojia izay novolavolain'ny sehatra tsy miankina ny agenda, dia misy ny zava-misy iorenan'ireo firenena izay ny fahombiazan'ny fanjakana tsy mahomby noho ny andraikiny mifehy ny fitadiavana tranga tsara kokoa eto amin'ny firenena. Amin'ity tranga ity dia niresaka kely momba ny resako farany nifanaovana tamin'i Gab!, Mpiara-miasa Geofumadas izahay izay, tao anaty kafe antsasak'adiny, dia nilaza tamiko momba ny fahitany ny BIM teo amin'ny sehatry ny Amerika Afovoany.
Raha ny zava-misy, ny traikefa tsara indrindra azo trandrahana amin'ity toe-javatra ity dia mety hafenin'ny fahitana rafitra tsy voafetra; ka tsy maintsy hampiasa izay renay tany isika. Hatrany am-piandohana dia misy fanaparitahana bebe kokoa ny fandrosoana any amin'ireo firenena toa an'i Costa Rica sy i Panama, na izany aza, any amin'ireo firenena hafa ao amin'ny faritra, na dia misy aza ny fahalalana amin'ny sehatra tsy miankina, dia tsy hita miharihary amin'ny tontolon'ny fampiharana ny tontolon'ny akademika sy ny fanjakana. Raha hitantsika amin'ny fomba fijerin'ny BIM faobe izany dia paikady mampifandray ny fitantanana ny fampahalalana sy ny fitantanana ny asa eo amin'ny sehatry ny fananganana fenitra.
Firenena manana firoboroboana mahomby kokoa i Panama, misy fisokafana bebe kokoa ary maika. Mila miala fotsiny amin'ny seranam-piaramanidina ianao ary mandehandeha amin'ny làlambe ary mahita fa ny sehatry ny trano sy tany dia oasis miavaka any Amerika Afovoany, noho izany, ny BIM dia fitambaran'ny fampidirana ekosistia mandrafitra ireo fotodrafitrasa ara-batana sy ara-teknika ary informatika samihafa. . Ambonin'ny zava-drehetra, ny fahatsiarovana ny atao hoe Panamà amin'ny maha-firenena azy manana hetsika ara-barotra misy ny toe-javatra misy ny fangatahana manerantany, izay tsy zakan'izy ireo.
Ny 14 Jolay 2016 ny Panameana Antenimieran'ny Construction CAPAC miaraka amin'ny Panameana Society ny injeniera sy Architects SPIA sy ny Oniversite any Panama, teknolojia sy USMA, nanambara ny fananganana ny birao ara-teknika izay manome ny fampiharana ny BIM dingana, antsoina hoe Forum BIM Panama.
Misy fikambanana marobe mampiroborobo ny fampiasana ny BIM toy ny Autodesk, ny Bim Forum of Panama, Bentley Systems, PCCad, Blue AEC Studio, Comarqbim, ankoatra ny hafa.
Ny tetikasa BIM miavaka iray ao Panama dia ny fanitarana ny Lakandranon'i Panama.
BIM Model Panama Canal. Nahazo ny loka Autodesk BIM Experience ho an'ny famolavolana ny trano fahatelo hidirana azy.
Amin'ny ankapobeny, misy ny fisokafana malalaka eo amin'ny sehatra tsy miankina, miaraka amin'ny sehatra matihanina mangataka ny fametrahana BIM ho fepetra ho an'ny fampandrosoana ny tetikasany.
Ity firenena ity dia mampiroborobo amin'ny fomba sasany ny fampiasana ny fizotry ny BIM amin'ny fananganana vaovao. Amin'ny ankapobeny, noho ny fepetra iraisam-pirenena, manomboka ny orinasa tsy miankina sasany manomboka ny dingana sasany; Na izany aza, voafetra ny asa ho an'ny mpiasan'ny BIM, raha ampitahaintsika amin'ny firenena any Amerika Atsimo. Efa manana ny Bim Forum Costa Rica i Costa Rica.
Ny BIM Forum Costa Rica dia Komitin'ny Teknikam-pahefana natokana ho an'ny fampandrosoana ny fanatanterahana ny tetikasa BIM ao amin'ny indostrian'ny fanorenana.
Amin'ny maha-mahaliana, ohatra, tao amin'ny Inter-Amerikana Development Bank (Fotodrafitrasa IDB Management sy ny Division ny Siansa, Teknolojia sy Fanavaozana (CTI), no miasa amin'ny fampidirana BIM amin'ny famolavolana sy fanaraha-maso ny tetikasa foto-drafitrasa.
Ao Costa Rica, ohatra, dia tafiditra ao amin'ny fepetra arahana ny fanaraha-maso ny fifindra-monina fanorenana famolavolana sary BIM modely sy ny fanaraha-maso mandritra ny fanorenana. Izany hoe, fiaramanidina 2D 3D mba ho lasa, ary ny toetra vaovao, dingana fanorenana (4D) sy ny vidiny fanaraha-maso (5D) ho tafiditra; izany hanehoana ny fotoana, ezaka ary vola lany mitombo miandalana, ny mifindra avy amin'ny nentim-paharazana iray BIM famolavolana. Vokatra, ny vola lany, mila fe-potoana sy ny fanovana nandritra ny asa fanorenana teo amin'ny San Gerardo - Barranca, dia azo ampitahaina amin'ny fizarana Limonal - San Gerardo, izay manana endrika mitovy fepetra arahana, ka hatsangana indray miaraka.
Na dia misy lavitra mba handeha any amin'ny faritra, ny vokatry ny mpanamory dia ho fandrisihana ho an'ny fitondram-panjakana ho fampiharana BIM sy hiaina ny soa mamokatra sy ny fahombiazana amin'ny alalan'ny fiovana ifotony teny an-dalana ny asa no novonoina ho faty.
Satria firenena lehibe izany, misy ny fandrosoana goavana amin'ny BIM. Manana ny Master amin'ny Modeling sy ny fitantanana ny tetik'asa fanorenana BIM ao amin'ny Oniversite an'i Valle de Guatemala sy ny Universidad del Istmo miaraka amin'ny Master in Bim Management.
Misy ireo orinasa natokana ho an'ny fampiofanana any Bim toa an'i Revit Guatemala sy GuateBIM (BIM Council of Guatemala). Misy ny fanekena amin'ny sehatra tsy miankina. Ohatra iray ny orinasa Danta Arquitectura izay manolo-tena hampiditra ny BIM. Ary aleo tsy ajanona ao ireo mpaninjara rindrambaiko BIM izay tsy mijanona amin'ny fampiroboroboana ity fomba fiasa ity.
Ny tontolon'ny bilaogy El Salvador
Any Salvador, dia misy fampahalalana kely tsy misy. Na izany aza, ireo tetikasa toy ny namboarin'ny orinasa Structuristas Consultores EC izay novolavolaina tamin'ny BIM dia miorina.
Tetikasa: Ivotoerana momba ny fizotran-tsakafo TIER III sy tranobn'ny biraon'ny orinasa Banco Agrícola, any San Salvador.
Izy ireo dia tranobe anankiroa misy faritra fanorenana ny 11,000 m2 ka ao anatin'izany: santionan'ny data miaraka amin'ny toetran'ny TIER III sy ny fananganana biraon'ny orinasa 5.
Famolavolana firafitra, famolavolana HVAC ary fandrindrana ny injeniera marobe, mampiasa fitaovana BIM sy fanaraha-maso ny fandrosoana miaraka amin'ny maodely BIM.
Fanabeazana an-tsoratra: Civil, Structures, Architecture, Electricity, Mechanics, Tavoahangy.
Na dia tetikasa misy fananganana BIM ity, miaraka amin'ny fitsipi-pifehezana samihafa; Mazava ho azy, ny ampahany amin'ny antontan-taratasy sy ny drafitra dia tsy dia miharihary; na dia eny aza amin'ny fangatahana maodelinao. Misy elanelam-baovao vitsivitsy ato, raha ny lahatsoratra an-gazety na ny fifantohana akademika aza dia mifantoka amin'ny fanaingoana endrika / firafitra fotsiny, fa manadino ny mijery ireo dingana miasa aorian'ny famolavolana mandra-pahatongan'ny fotodrafitrasa tafiditra ao anatin'ny tontolon-kevitra.
Ny tontolon'ny bilaogy Nicaragua
Eto isika dia mahita famantarana momba ny toeram-pampianarana, kongresy sasany na dia mihoatra noho ny tamin'ny fampiharana aza, mbola eo amin'ny sehatra hentitra hampidirana ny BIM. Misy fikarohana ara-tsekoly sasany izay mampiditra ny teny, toy ny fianarana BRIC.
Ohatra, CentroCAD, izay raha ny fahitako azy dia iray amin'ireo ivon-toeram-panofanana tsara indrindra any Nikaragoà, ny fandaharam-pianarana Revit dia matetika mifantoka amin'ny Architecture sy MEP, saingy kely dia kely ny fahitantsika ny lohahevitra momba ny rafitra, ny vidiny na ny fanahafana ny fananganana. Na dia ianarana aza ny BIM dia tsy mitovy ny mianatra môdely amin'ny rindrambaiko fa tsy ny mahatakatra ny fomba fanao amin'ny fomba feno ary ny fitaovana dia fitaovana fitehirizana sy fampandehanana ny angona fotsiny.
Izy io dia faritany mahavokatra ho an'i Autodesk izay nanatanteraka kaongresy BIM tao Nikaragua; lafin-javatra iray izay nanetsika sy nitohy ny ezaka nataon'ny Oniversite sy ireo fikambanana matihanina momba ny haitao Geo. Miaraka amin'ny BIM Forum 2019 natao tany Managua, miaraka amin'ireo mpandahateny manerana an'i Amerika Afovoany, ny Repoblika Dominikanina ary i Colombia, dia miharihary fa amin'ity firenena ity dia betsaka ny asa avy amin'ny sehatra tsy miankina, manana anjara biriky lehibe ny akademia, fa ambonin'izay rehetra ilaina ny mifantoka amin'ny ezaka. hampiakatra ny mety ho an'ny BIM amin'ny politikam-bahoaka.
BIM any Honduras
Tahaka an'i Nikaragoà, dia eo am-panaovana sosialy, fanofanana, kongresy ary fampahafantarana ireo matihanina amin'ny asa fanorenana. Misy ireo orinasa natokana hampiroborobo ny fampiharana ny BIM sy ny fiofanana momba ny mpiasa ao aminy, toa ny PC Software, Cype Ingenieros, ary ny College of Architects of Honduras.
Misy fahalianana amin'ny sehatra tsy miankina hanombohana ny fampiharana ny BIM, miaraka amin'ny fetrany hatrany. Mahaliana ny fahaterahan'ny orinasa vaovao miaraka amin'ny vina vaovao toa ny Green Bim Consulting, izay natokana ho an'ny consulting sy ny fampandrosoana ny tetikasa Sustainable BIM. Orinasa matanjaka kokoa toa ny Katodos BIM Center no solontenan'ny Honduras.
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, ny indostrian'ny fanorenana manokana dia nahavita nametraka metatra 1,136.8 tamin'ny tetikasa isan-karazany tany Honduras, ny 57,5% dia natao ho an'ny tetikasa fonenana; 20,2% commercial, 18,6% amin'ny serivisy ary 3,7% industrial. Amin'io vola io dia ampahany kely amin'ny tranobe no nampiasa ny teknolojia tsy nentim-paharazana toy ny BIM hanamboatra tetikasa.
Ny injeniera Marlon Urtecho, tale jeneralin'ny Accensus Structural Systems, dia nanamafy fa ny fandrosoana amin'ny fananganana dia mamela ny tetikasa hojerena amin'ny fomba mazava kokoa: "Amin'izao fotoana izao, ny birao ara-tsakafo dia afaka mampiseho ny tetik'izy ireo amin'ny haavony fahatelo haingana kokoa sy amin'ny sary marobe"Hoy izy. Mazava fa ny fahitana tahaka izao dia mampiseho fa mbola tsy mazava tsara ny tena marina momba ny BIM.
Na dia eo aza ny vaovao misongadina avy any Honduras, ny valin'ny March 2019 vao haingana, daty ny Kongresy voalohany an'ny BIM any Amerika Afovoany sy Karaiba. Somary tara ihany satria efa voasoratra ilay lahatsoratra, na izany aza dia mitondra jiro mahaliana ho an'ny lahatsoratra iray manodidina ny BIM any Amerika Afovoany.
Na dia eo aza ny zava-tsarotra ao amin'ny orinasa, eo amin'ny orinasa Honduras dia manasongadina ny sasany fandrosoana amin'ny fampiasana ny BIM (farafahakeliny eo anivon'ny vaovao modeling), indrindra ao amin'ny sokajy an'ireo trano, izay afaka mampiseho fandrosoana eo amin'ny famolavolana tetikasa. Ho an'ireo hetsika fototra amin'ny ambaratonga 2 (BIM Level2) izay ampiasana ny fampiharana azy ho toy ny tarehimarika virtoaly amin'ny elatry ny fananganana amin'ny tsirairay amin'ireo tapany izay ampiasaina amin'ny fananganana trano, izay mampanantena fa farafaharatsiny any amin'ireo tanàna mandroso.
Lahatsoratra iray avy amin'ny gazety Procesohn no manohana, http://proceso.hn/tecnologia/2-ciencia-y-tecnologia/constructores-hondurenos-avanzan-en-el-uso-de-tecnologia-bim.html
Taorian'ny kafe roa kaopy sy tsindrin-tsakafo matsiro dia saika nahavita niaraka tamin'i Gab izahay! fa mbola tsy nahavita ny fipetrahana tany Amerika Afovoany ny BIM. Mazava ho azy fa ny fandinihana voarindra sy manara-dalàna no banga lehibe amin'ity raharaha ity, amin'ireo izay tsy maintsy mampiroborobo ny fanavaozana sy ny fanarahana fenitra. Azo antoka fa misy antony hafa, fa amin'ny servisy dia soratantsika farafaharatsiny izao manaraka izao ho laharam-pahamehana:
Ny sandan'ny fanofanana sy ny tsy fahampian'ny fiofanana mahomby. Ny mpitantana ny BIM dia isaina amin'ny rantsantanana; Rehefa mieritreritra fa lafo be ny fitondrana mpanentana iraisam-pirenena.
Ny lafo be amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny rindrambaiko (lisansa any Amerika Afovoany dia afaka mamerina hatramin'ny fotoana 3 izay laniny any Meksika, Etazonia na Chile). Ny orinasam-pizarazara dia manondro azy io ho an'ny vidin'ny varotra, noho izany dia tsy maintsy manangona ny vidiny izy ireo mba hahatratra ny tanjona napetraky ny orinasan'ny ray aman-dreny. Izany dia mampiroborobo ny fanaovana pirinty sy ny tahotra ny fametrahana BIM noho ny sazy izay azo raisina amin'ny solosaina rindrambaiko.
Ny sarany avo lenta amin'ny ordinatera ilaina amin'ny fandaminana ny fomba fiasa BIM, toy ny fampidirana plugins ho an'ny fitaovana ivelany na fanolorana.
Tsy misy fomban-drazana amin'ny drafitra sy fanomanana henjana ny antontan-taratasy ilaina amin'ny tetikasa. Ny BIM dia mitaky ny famenoana ireo endrika toy ny EIR, BEP, BIM Protocols, manaraka ny fitsipika, sns. -Iza no manam-potoana, rehefa angatahiny aho hanomboka ilay tetikasa omaly - Ny teny jargon fantatra amin'ny mpandraharaha matihanina izay tsy mifanaraka tsara, satria rehefa mandamina tsara ianao, dia afaka manao tetik'asa amin'ny fotoana voatokana.
Ny haavon'ny kolikoly izay mampiavaka ireo toe-javatra ireo. Indraindray ny manafina ny fampahalalana dia ahafahana mampihena ny sandan'ny tetikasa, ny tanjon'ity tetikasa ity, dia mora kokoa ny mamafa azy. Mazava amintsika fa ny fananganana BIM dia manapaka fanao ratsy amin'ny kolikoly amin'ny tetikasam-panjakana.
Ireo manampahaizana amin'ny fanorenana dia tsy te-hiala an'i AutoCAD, mbola eo amin'ny sehatra rehetra izay tsy tian'izy ireo hahatakatra ny mety ho an'ny 3D modely. Amin'ny ampahany, satria tsy maintsy misy mitovy amin'ny tolotra asa izay hanonerana ny ezaka amin'ny fianarana, ary indrindra indrindra ny fahafahana manavao amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana rehefa mahita ny BIM ho zavatra mihoatra noho ny 3D modely.
Ny fampiharana ny BIM dia manana ny vidiny, indrindra amin'ny rindrambaiko raha te hiasa ara-dalàna ianao; Tsy mora izany ho an'ireo orinasa maro izay sahirana miaina ao anatin'ireny toekarena kivy ireny, izay vitsy no mandray ireo tetikasa lehibe noho ny ampihimamba misy. Ary mba ho mpanazatra ny BIM miaraka amin'ny lalàna rehetra dia ilaina ny milamina ny fahazoan-dàlana. Ny fanangonana lozisialy hampiofanana ny BIM dia mety hidika amin'ny fampiasam-bola $ 3,500.00 isan-taona ho an'ny lisansa iray monja, any amin'ny firenena sasany any Amerika Afovoany. Mbola ho hita eo hoe manatsara ny lozisialy amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpanome rindrambaiko lehibe.
Ho famaranana, i Amerika Afovoany amin'ny ankapobeny dia eo am-panaovana ny fiaraha-miasa amin'ny BIM, miasa miaraka amin'ny maodely 3D izahay, saingy voafetra tokoa amin'ny haavon'ny sehatra hitantsika amin'ny toe-javatra hafa. Amin'izao fotoana izao, mamela ny fanavaozana vaovao an'ity lahatsoratra ity izahay miandry, mahafantatra fa tamin'ny kaongresy farany teo dia manana famakiana vaovao aorian'ny fampahalalana izay indrisy fa tsy voarindra mihoatra ny fifanakalozana hetsika manokana.
Na izany aza, ny ampahany amin'ny vola madinika any Amerika Afovoany dia ny fahafahana mahaliana raha toa ka mahavita miditra amin'ny sehatry ny governemanta ireo mpandray anjara amin'ny sehatra governemanta, tsy miankina ary matihanina, alohan'ny tombontsoa sy ny zavatra ilaina ho an'ny fanamarinana.
Previous Post«Previous Soraty ny teboka, lin-rindrina ary andalan-tsoratra amin'ny polygonal avy amin'ny Excel mankany AutoCAD
Next Post Andalana contour avy amin'ny Google Earth - ao anatin'ny dingana 3manaraka »